वैशाख १० अघि अर्को सरप्राइज दिनेछौँ : प्रधानमन्त्री – Simple Khabar
यता, मन्त्री तत्काल हेरफेरबारे आफ्नो कुनै सोच र योजना नरहेको पनि प्रम ओलीले स्पष्ट पारे । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रुपमा नै मन्त्री हेरफेरको तयारी भइरहेको बताएपछि यसबारे निकै चर्चा भएको थियो ।
तर, रातोपाटीसँगको विशेष कुराकानीमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री हेरफेर हुन सक्ने विषय भएपनि त्यसलाई तत्काल हेरफेर गर्ने बारे आफूले कुनै सोच नबनाएको बताए ।
रातो पाटि बाट
PREVIOUS POST Previous post: कन्डम बिना गर्भ नरहने यौन सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ?? त्यसो भए यौन सम्पर्कको लगत्तै यसो गर्नुहोस
NEXT POST Next post: वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक यौनसम्पर्क गर्न सक्छ ? जानी राखौ